Ndị na -emepụta CE/ 7KW & ndị na -eweta ya China CE/ 7KW Ụlọ ọrụ
Ọdịmma dị elu maka Ọnọdụ 3 32A Single Phase 3phase EV Charging Station
Ọdịmma dị elu maka onye nrụpụta ọdụ ụgbọ mmiri China EV, Igbe Mgbidi Type2 Type1 EV Charging Station, n'ezie kwesịrị ka ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a bụrụ ihe ga -amasị gị, gbaa mbọ hụ na ị kwere ka anyị mara. Anyị ga -enwe obi ụtọ ịnye gị nkwupụta na nnata nke nkọwapụta nke ọma. Anyị enwetala ndị ọkachamara R&D ọkachamara ahaziri iche iji zute ihe ọ bụla nwere ihe mgbapụta, Anyị na -atụ anya ịnata ajụjụ gị n'oge na -adịghị anya ma nwee olile anya na anyị ga -enwe ohere isoro gị rụọ ọrụ n'ime ọdịnihu. Nabata ka ilele nzukọ anyị.
Wallbox Ụdị 2 16A 7kw Otu Phase EV Charging Point EV Charger maka Nchaji Ụgbọ ala Smart
Monophase 32 amp nwere nrụpụta 7kW mode 3 ọdụ ụgbọ ala eletrik zuru oke maka ọnọdụ ọ bụla. Socketed na eriri ụdị 2 (IEC 62196) dakọtara na ụgbọ ala niile. Site na ọkwa IP65 mmiri/uzuzu ị nwere ike zuru ike na -ahapụ ụgbọ ala na -akwụ ụgwọ n'otu abalị ọbụlagodi na mmiri ozuzo. A na -eme nkeji ahụ site na polycarbonate siri ike nke sitere na Japan. Ọ na -abịa na wuru na 30 Amp na DC6mA iji nyefee oke ma mebie nchebe ugbu a.